Raw Nifuratel ntụ ntụ (4936-47-4) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Nifuratel ntụ ntụ (4936-47-4)
Rating: SKU: 4936-47-4. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nhazi nke Nifuratel ntụ ntụ (4936-47-4), n'okpuru usoro CGMP na usoro njikwa mmachi.
Akwụkwọ ntụ ntụ nke Nifuratel
Ufukporatel ntụ ntụ isi agwa
aha: Akwụkwọ ntụ ntụ Nifuratel
Usoro Molecular: C10H11N3O5S
Molekụla arọ: 285.28
agba: White na-acha ọcha Crystalline ntụ ntụ
Ngwá ụfụfụfụ ntụ ntụ na ojiji
Nifuratel ntụ ntụ Usage
Akwụkwọ ntụ ntụ Nifuratel bụ ọgwụ eji gynecology. Ọ bụ onye na-ahụ maka antiprotozoal na nke antifungal nke nwere ike ịnye ọnụ. Akwụsịghị ntụ ntụ Nifuratel maka iji ya mee ihe na United States. A na-eji ọnụ ekwu okwu, ma ọ bụ dịka ụbụrụ na-agba ume, a na-eji ya na-agwọ ọrịa dịgasị iche iche nke ọrịa genito-urinary, karịsịa ma ọ bụrụ na enweghị ezi nyocha ọ dị. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji ya na ịgwọ ndị inyom na-egosipụta nsị na-emetụtaghị mmiri ma ọ bụrụ na enweghi mgbagwoju anya ma ihe kpatara ya bụ Trichomonas vaginalis ma ọ bụ Candida dị ka Candida albicans.
A na-eji ntụ ntụ nke Nifuratel (Magmilor) tụnyere metronidazole (Flagyl) n'ime ọgwụgwọ trichomonal vaginitis site na ịnwale ikpe-azụ abụọ. Naanị 18 sitere na 47 ọrịa (38%) mesoro na Nifuratel raw ntụ ntụ hụrụ na a gwọọ ya, ma 42 sitere na 49 ọrịa (85%) emeso ya na metronidazole ka a gwọrọ. Mmeghachi omume siri ike, nke chọrọ nkwụsị nke ọgwụgwọ, mere na mmadụ atọ na-emeso ya na Nifuratel raw ntụ. Enweghi mmetụta dị egwu na metronidazole. Nsonaazụ nke ule a na-egosi na Nifuratel ntụ ntụ abụghị ihe na-enye afọ ojuju maka metronidazole na ọgwụgwọ nke trichomoniasis.
Ịdọ aka ná ntị na ntụ ntụ Nephi
Ngwurugwu Nifuratel nke dị elu maka ikpo nje nke dị mfe na nke a na - agwakọta: Otu mkparịta ụka nwere ike ịchọta akwụkwọ mkparịta ụka na-
A na-atụle nrụpụta ọrụ na nchekwa nke abụọ nke Nifuratel ntụ ntụ maka ọgwụgwọ nke nje vaịnitis (AV).
Nke a bụ ihe a na-achọ ịchọta ndị na-arịa ọrịa a chọpụtara na agwọ ọrịa na Tianjin atọ Central Hospital dị n'etiti Jenụwarị 2012 na December 2013. A na-edozi nsogbu nke nje nje bacteria (BV), vidio nke na-adịghị ọcha (VVC), ma ọ bụ / na trichomonal vaginitis (TV, AV). Ndị na-arịa ọrịa na-eme ka ndị na-arịa ọrịa Nifuratel raw powder-500 (500 mg Nifuratel powder, intravaginal, 10 days) ma ọ bụ Nifuratel raw ntụ ntụ-250 (250 mg Nifuratel ntụ ntụ, intravaginal, 10 ụbọchị), ma gbasoo ruo ụbọchị atọ ruo ụbọchị asaa . Ihe ndị isi na nke abụọ bụ nkwụghachi na nsogbu na ihe ọjọọ, n'otu n'otu.
Ọmụmụ ihe ahụ gụnyere ndị ọrịa 142 na AV. Afọ anaghị adị iche n'etiti otu (n = 71 ọ bụla), na nkesa ọrịa yiri: 29 (40.85%) AV dị mfe na 42 (59.15%) AV agwakọtara (AV + BV, 42.86%; AV + VVC, 30.95% ; AV + TV, 26.19%). N'ebe ndị ọrịa nwere AV dị mfe, ọnụego mgbake ahụ apụtaghị iche n'etiti Nifuratel raw powder ‐ 500 (26/29, 89.66%) na Nifuratel powder ‐ 250 (22/29, 75.86%). Na ndị ọrịa na AV agwakọtara, ọnụego mgbake dị elu karịa na Nifuratel ntụ ntụ ‐ 500 karịa na Nifuratel ntụ ntụ group 250 otu (AV + BV, 88.89% vs 50.00%; AV + VVC, 76.92% vs 30.77%; AV + TV, 90.91% na 36.36%; niile P <0.05). Naanị otu onye ọrịa (Nifuratel raw ntụ ntụ ‐ 500) kọrọ akụkọ ọjọọ (mmeghachi omume anaphylactic dị nro).
Ngwunye 500 nke na-ekpo ọkụ nke Nifuratel gosipụtara n'ụzọ dị irè ike maka ọgwụgwọ AV, karịsịa nke AV, ọ dịkwa elu karịa usoro ọgwụ 250 mg na ọgwụgwọ AV.
Na ntụ ntụ Nifuratel (CAS 4936-47-4) na-egosiputa ọrụ ike antiprotozoarian na antibacterial ma nye ya mmetụta dị nro, ma ọ dịghị arụsi ọrụ ike megide flora physiologic. A nyochawo nlekọta ahụike na ihe karịrị ndị ọrịa 12,000. Ahụmịhe zuru oke nke na-enye aka na Nifuratel ntụ ntụ na-akwado na ọgwụ ahụ dị mma ma dị irè maka ọgwụgwọ nke trichomoniasis, nje bacterial, candidosis, na, karịsịa, na ndị ọrịa na-ata ahụhụ site na ọrịa. Ntụle nke nyocha ndị na-agwọ ọrịa na-atụnyere Nifuratel raw ntụ ntụ na metronidazole (CAS 443-48-1) na ọrịa nje. Ejikọtara ihe niile a na-ahụ maka ọrịa metronidazole na-achịkwa na ndị ọrịa na-arịa ọrịa vulvovaginal, na-agbaso ihe ndị a: 1) ọgwụgwọ dịka nhụsianya nke mgbaàmà na ihe ịrịba ama, na nchọpụta ihe na-adịghị mma; 2) nyocha nke ụmụ mmadụ na-arụ na ụzọ dị irè ka eji eme ihe ugbu a. Ahoputawo ule asaa ajuju, tinyere ndi 1767 n'ozuzu ha, 832 ndi si na ya na Nifuratel uzuzu na 935 tinyere metronidazole. Ihe si na meta-analysis kwadoro mmekorita dị n'etiti ndị na-emepụta nke Nifuratel na metronidazole: ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ndị ọrịa na-agwọ ọrịa n'ime ìgwè abụọ ahụ bụ 88.5% na 90.0%, n'otu n'otu, na ọnụnọ homogeneity n'etiti ọmụmụ (p = 0.342). Na nyocha nchịkọta na ntughari nyocha, nkwụnye obi ike nke nkwụsịtụ nke gụnyere 1 na p omume maka ịnwale echiche nke enweghị ọdịiche dị n'etiti ọgwụgwọ bụ 0.656-1.266, p = 0.582 (nrụpụta oge) na 0.643-1.290, p = 0.599 ( nsogbu ndi ozo), dika ndi ozo. Ọzọkwa, ụfọdụ nnyocha a na-achịkwa na ahụmịhe ahụike na-egosi na ngwọta ọgwụgwọ nke Nifuratel raw ntụ ntụ na ndị ọrịa na-ebute ọrịa n'ihi Trichomonas vaginalis + Candida ma ọ bụ Trichomonas vaginalis + nje bacteria ma ọ bụ na nje virus na aghara na nje bacteria bụ nke dị elu karịa nke metronidazole, n'ihi otutu ihe omuma nke uzo Nifuratel.
Mgbakpo ntụ ọka Nifuratel
Olee otú ịzụta Nifuratel ntụ ntụ si AASraw